Hamas - Yintoni iHamas - FAQ
Umbuzo: Yintoni iHamas?
Ukususela ekudalweni kukaSirayeli ngo-1948, abantu basePalestina babengazange babe nelizwe, kodwa kungekho ngaphandle kwezinto ezininzi ezenza imibutho yezopolitiko, ukunyakaza, imibutho yokulwa. Eyokuqala kunye neyona nto ihlala emva kwe-1948 yamaPalestina amaFatah. Ukususela ngo-1987, nangona kunjalo, u-Fatah ochasene namandla kunye nempembelelo yiHamas. Yintoni i-Hamas, ngokuchanekileyo, kwaye iyayithelekisa njani kwaye ihambelana namanye amaqela asePalestina?
Impendulo: I- Hamas iyisigidimi, iqela lezopolitiko kunye nenhlangano yentlalo kunye nephiko layo lempi, i-Ezzedine al-Qassam Brigades. I-Hamas ithathwa njengentlangano yombandelela yi-United States, i-European Union kunye ne-Israel. Ukususela ngo-2000, i-Hamas iye yadibaniswa nokuhlaselwa okungaphezu kwama-400, kuquka ukuhlaselwa kweebhomu ezingaphezu kwama-50, ezininzi zazo zihlaselwa ngabangqongquthela abantu base-Israel. I-Hamas ibhekwa njengentlawulelo yenkululeko ngabantu abaninzi basePalestina.
Ngoxa i-Hamas iyaziwa eNtshona ikakhulu ngenxa yama-Islamism e-ultra-conservative, i-militancy kunye nokuhlaselwa kwa-Israyeli, "ukuya kuma-90% ezibonelelo zayo kunye nabasebenzi bazinikele kwiinkampani zenkonzo-karhulumente" (ngokutsho kukaRobin Wright kwiiNgqungquthela nakwiSithunzi: Ixesha elizayo le-Middle East (uPenguin Press, 2008). Lezo ziquka "inethiwekhi eninzi yeenkonzo zentlalo, izikolo, iiklinikhi, imibutho yentlalontle kunye namaqela amabhinqa."
I-Hamas ingumfanekiso wesi-Arabhu kuHarakat al-Muqawama alIslamiyya , okanye uMbutho wamaKatolika wokuShathisa.
Igama elithi Hamas lithetha "intshutshiso." U-Ahmad Yassin wadala iHamas ngoDisemba 1987 eGaza njengephiko eliphikisayo loMzalwana wamaSulumane, inkokheli yamaSulumane ehlala e-Egypt. I-Hamas 'charter, eyapapashwa ngo-1988, idinga ukupheliswa kwamaSirayeli kunye nokugculela amanyathelo oxolo. "Iingxaki ezibizwa ngokuba nezisombululo, kunye neenkomfa zamazwe ngamazwe ukulungisa ingxaki yePalestina," umchasi uthi, "zonke zichasene neenkolelo ze-Islamic Resistance Movement.
[...] Ezi ngqungquthela azikho nje iindlela zokumisela abo bangakholwayo njengabalamngqangi kumazwe aseSilamsi. Ukususela nini na abangakholwayo benza ubulungisa kwabakholwayo?
Ukwahlukana Phakathi kweHamas noFatah
Ngokungafani neFatah, iHamas iyalahla ingcamango-okanye inokwenzeka-yesisombululo sesibini phakathi kwamaSirayeli kunye namaPalestina. Iinjongo eziphambili zeHamas ngumnye wamaPalestina apho amaYuda aya kuvunyelwa ukuba aphile njengoko anako kumazwe ase-Arabhu kwimbali. Umoya wasePalestina, ekubonweni kweHamas, wawuya kuba yinxalenye yecaliphate enkulu yamaSilam. I-PLO ngo-1993 yamkela ilungelo likaSirayeli ukuba likho kwaye lijonga isisombululo sesibini, kunye namaPalestina akha i-Independent State eGaza kunye ne-West Bank.
Hamas, Iran kunye ne-Al-Qaeda
I-Hamas, inhlangano ecwangcisiweyo ye-Sunni, ixhaswa kakhulu yi-Irani, inkululeko yentando ye-Shiite. Kodwa i-Hamas ayinayo iminqophiso e-al-Qaeda, nayo inhlangano ye-Sunni. I-Hamas ikulungele ukuthatha inxaxheba kwinkqubo yezopolitiko, kwaye ngokuqinisekileyo yachithwa ekunqobeni ukhetho lukaMasipala kunye nolwasemthethweni kwiiNdawo eziPhezulu. I-Al-Qaeda iyanqabisa inkqubo yezopolitiko, ibiza ngokuba yintsebenziswano kunye neenkqubo "zokungathembeki".
Ulwalamano phakathi kweFatah neHamas
U-Fatah oyingqangi oqalayo u-Hamas, umbutho wezempi, umbutho wama-Islamist ogunyazisiweyo onamandla amakhulu eGaza.
Umongameli wasePalestina, u-Mahmoud Abbas, owaziwa nangokuthi nguAbou Mazen, ungumholi we-Fatah wamanje. Ngomhla kaJanuwari 2006, i-Hamas yamangalisa uFatah kunye nehlabathi ngokuphumelela, kukhetho oluninzi lukhululekile nolungenamkhethe, ininzi ePalamente yasePalestina. Ivoti yayiyihlazo ku-Fatah inkohlakalo engapheliyo nokungasebenzi. Unkulumbuso wasePalestina ususela ngo-Ismail Haniya, inkokeli yeHamas.
Ukuphikisana phakathi kweHamas kunye neFatah kwaqhuma ngoJuni 9, 2007, kwimpikiswano evulekile ezitratweni zaseGaza. Njengoko uRobin Wright wabhala kwiiNgqungquthela nakwizithunzi: Ixesha elizayo leMiddle East (i-Penguin Press, 2008), "Amanqwanqwa eemfazwe eziqingqiweyo ajikeleza iSixeko saseGaza, ahlasele izibhedlele ezitratweni, aze abulawe. waphonsa abaphikisayo kwizakhiwo eziphakamileyo, kunye nabamshayeli bebhamu bezingela abaxhonywe ngamagada esibhedlele ukuze bawaphelise. "
Imfazwe yayidlulile kwiintsuku ezintlanu, kunye neHamas ngokukhawuleza ibambe uFatah. Amacala amabini ahlala e-loggerheads kude kube ngoMatshi 23, 2008, xa uFatah noHamas babonakala bevumelana nokuxolelana kwe-Yemeni. Esi sivumelwano siza kutshatyalaliswa kungekudala.
Uluhlu lweenkcukacha ze-Independence yase-Afrika